Vaovao - Mametraka fanomezana ho an'ny antoko ankizy ny stationery
avoaky set dia anarana be dia be milaza ny fitaovana fanamboarana vita amin'ny varotra, ao anatin'izany ny taratasy tapaka, valopy, fitaovana fanoratana, taratasy endrika mitohy, ary kojakoja birao hafa. Ho tonga amin'ny taom-pianarana vaovao amin'ny volana septambra ho avy izao. Efa nanomana setrim-panazavana ho an'ny zanakao ve ianao? Mbola mitady andiam-panoratana manokana izay mamy ho an'ny ankizy ve ianao? Mety tsy hijery lavitra intsony ianao fa ireo vaovao vaovao vaovao - Little Tiger Sets, izay tsy fanomezana tonga lafatra ho an'ny ankizy fotsiny, fa hampisongadina anao eo an-tsena ihany koa.
Ny tombony azon'ireo fitaovana manokana ho an'ny ankizy dia ireto manaraka ireto:
1. 6pcs stationery apetraka ao anaty boaty mitondra plastika miaraka amin'ny hatsarany
2. Mampiavaka ny endrika amam-bika mahafatifaty izay tian'ny ankizy
3. Maimaimpoana ny bobongolo sy ny fanontana apetraka ho an'ny volavola efa misy
4. Ambony kalitao, ny fitaovana rehetra dia tsy misy poizina ary tsy misy fofona
5. Araho ny fenitra fitsapana EN71, REACH, CPSIA ary ASTM
6. Fanomezana tonga lafatra ho an'ny sekoly, trano, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fety na fotoana hafa
7. Azonao atao ny manana anao namboarina ho toy ny fangatahanao
8. Afaka manome santionany maimaimpoana ho anao izahay hijerena kalitao
9. Tsy misy MOQ miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana, fotoana fandefasana haingana
Hisy fiovana lehibe ihany koa ny fampivoarana ny tsipika vokatra vaovao miaraka amina fitaovam-pitaterana mandritra ny fotoam-pianarana mafana. Ankoatry ny famolavolana misokatra efa misy dia raisina am-pitiavana ny endrika amam-panao. Miaraka amin'ny orinasa 3 & mpiasa 2500 mahery, ary lasa mpanamboatra Disney, McDonald's, Coca-Cola & NBC Universal, Pretty Shiny Gift dia nanolo-tena hamokatra setroka famoronana famoronana vaovao, anisan'izany ny pensilihazo, mpanapaka, famafana, maranitra, karazan-pensilihazo isan-karazany ho an'ny ankizy. Ny fiarovana, manavao, avo lenta no tanjonay.
Raha manana fanontaniana hafa momba ny fanomezana fanomezana momba ny bokikely na zavatra azonay atao ho anao izahay, dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny sales@sjjgifts.com.